LG weputara Soundbars site na 2021 ya na nkwado jikoro nke airplay 2 | Esi m mac
LG weputara ogba ụda site na 2021 site na nkwado nkwado n’ime airplay 2
Manuel Alonso | 08/04/2021 16:00 | ọtụtụ
Onye na-emepụta Korean nke LG nwere ike ọ gaghị ama otu esi eme ekwentị dị mma ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị ndị ọrụ masịrị ya, mana na ụda na telivishọn ọ na-ewe achicha ahụ. Na mmelite ngwaọrụ maka 2018 dakọtara na airplay 2 yana ụdị ndị ọhụrụ anyị nwere ahịa ekpuchi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ ihe kachasị mma nke Apple na ogo ihe oyiyi. Anyị enweghị ụda na ogwe ụda ọhụrụ oghere ahụ kpuchiri.
Onye na-emepụta ngwa elektrọnik nke Korea LG amalitela akara ụda ya maka 2021 yana nkwado wuru maka AirPlay 2, teknụzụ mgbasa ozi na ngwaọrụ nke Apple. Dị ka ọkwa na LG mkpokọta, Ogwe ụda ọhụrụ na-enye a adịchaghị audio ahụmahụ na-adaba adaba akara yana ihe eji eme eco na ihe ndi ozo.
Ọhụrụ a na-enye ọdịyo dị elu, mfe Njikọta, Arụ ọrụ Smart na ọmarịcha mma mara mma nke nwere ọdịdị ọgbara ọhụrụ maka iji kwado TV nke LG na-arụ ọrụ nke ọma na ndozi ọ bụla.
Akara 2021 bu dakọtara na Siri maka ijikwa olu na ịrụ ọrụ na-enweghị aka. Na AirPlay 2, ndị ahịa Apple nwere ike ịkwanye, chịkwaa ma kesaa egwu kachasị amasị ha na ọdịnaya ndị ọzọ kpọmkwem site na iPhone, iPad ma ọ bụ Mac ha. Ọzọkwa, ogwe ụda ọhụụ na-adaba na ọrụ AI Sound Pro nke LG TV. Ndị a na-ada ụda na-agụnye nkwado maka Dolby Atmos na DTS: X gburugburu usoro ọdịyo, nkwado maka Dolby Vision site na 4K gafere, Meridian Audio tuning, na teknụzụ Meridian Horizon kachasị ọhụrụ.
Site n'ụzọ ụfọdụ nke ụdị bụ Hi-Res Audio gbaara na-enweghị fun 24-bit / 96 kHz playback. Ọnweghị ihe ọ bụla. Ihe kachasị mma nwere ike ịdị n'otu na nke kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » LG weputara ogba ụda site na 2021 site na nkwado nkwado n’ime airplay 2
Ring na-ebuputa Floodlight Cam Wired Pro, igwefoto onyunyo ohuru ohuru
Trailergbọ ala izizi nke Osimiri anwụnta otu ọnwa mgbe mmalite ya